NAV: Dadka guryaha lagu karantiilo, waxey xaq u leeyihiin lacagta xanuunka shaqada. - NorSom News
NAV: Dadka guryaha lagu karantiilo, waxey xaq u leeyihiin lacagta xanuunka shaqada.
Hey’ adda NAV ayaa maanta bogeeda internetka kusoo qortay in dadka laga baarayo hargabka Corona ee dhakhaatiirtu ay ku xabisaan guryaha, ay xaq u leeyihiin lacagta xanuunka shaqada(Sykepenger).
Hey’ adda ayaa sidoo kale sheegtay in hadii qofka uu dhakhtar ama degmada uu deganyahay ay ka joojiso shaqadiisa, sabab la xiriirta shaki laga qabo inuu ku dhacay hargabka Corona, uu sidoo kale xaq u leeyahay lacagta xanuunka shaqada.
NAV ayaa sidoo kale raacisay in qofkii iskiis isku xabiso(karantiilo), shaki uu ka qabo cudurka awgiis, uusan xaq u laheyn lacagtaas. Balse hadii uu dhakhtar kugu amro inaad guriga joogto, ayaad xaq u yeelan kartaa oo kali ah.
Xigasho/kilde: Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset
Previous articleNorway: Wadaad yiri: Lacag noo dir, aan hargabka Corona kaa xijaabnee.
Next articleNorway: Wasiir lagu heysto musuq-maasuq mushaar.